Online Yedzidzo Yechirungu yeVana | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Dzidza Chirungu neFrench pamhepo
Rarama kubva kuMontreal
Ipa vana vako ramangwana rakajeka!BLI ONLINE Zvirongwa zvevechidiki nevana
Unogara muMadrid, Beijing, Germany, Mexico, Brazil, Colombia… kana chero kumwe kunhu munyika? Ungade here kudzidza Chirungu kana chiFrench nevadzidzisi vakanaka uye vane hushamwari vekuCanada vanokukurudzira? Dzidza Chirungu kana chiFrench chimiro kunyaradzwa kweimba yako! Joinha imwe yeedu makuru epamhepo zvirongwa izvo zvakanyatso gadzirirwa kuti zvikubatsire iwe kudzidza kana kunatsiridza mutauro wauri kudzidza!
Joinha makirasi edu nhasi!
Kuvandudza hunyanzvi hwako hwedzidzo muChirunguZvechiChirungu
Chirungu ndiyo inonyanya kukosha yekupinda kukoreji kana kuyunivhesiti munyika zhinji. Kugadzirira zvakanaka kunofanirwa. Kugona kunyora zvinyorwa zvakarongedzwa zvakanaka zvinoita basa rakakosha.
Kunyora zvinyorwa zvinoda kusimbisa, kurongeka, kuvaka, uye kushandiswa zvakajeka kwemitauro mumamiriro ezvinhu akasiyana.
Kudzidza ChiRungu Kunyorera Vechidiki chirongwa chakanyatsogadzirwa icho chinokubatsira kuti uwane kugona kuverenga nekunyora hunyanzvi izvo zvichabatsira mwana wako kuwana mamakisi akakwira muchikoro, uye kuve akagadzirira zviri nani pashure-sekondari kubudirira.
Kosi yedu inoshandisa Zvinyorwa zveSainzi, senge zvinyorwa, izvo zvinosanganisira kutaurirana kurongeka uye kusiri kutaura kwechirungu.
• Kuongorora ndima dzetimu, pfungwa huru nepfungwa dzinotsigira
• Kutsanangura mazano nepfungwa
• Kunyora dzakasiyana mhando dzezvinyorwa
• Kugadzira zvinogadzirwa ndima
• Kuongorora basa
Nguva dzese dzinoratidzwa ndeye Montreal Local Nguva EST
Chivabvu 25, June 22, Chikunguru 20
Nyamavhuvhu 17, Gunyana 14
Mari Yekunyoresa: $ 100
Chikamu chimwe = mavhiki matanhatu